Isticmaalka technology 3-geesood ah waxaa si balaadhan loo isticmaalay adduunka ciyaaraha ah. Suuqa ciyaaraha Android waa hore u caansan ka mid ah taageerayaasha iyo horumarinta waxaa mar kasta ku hayaa inaan u adeegno dadka isticmaala ay wax cusub oo ka wanaagsan! Dukaanka play waxaa ku raran yihiin tiro ka mid ah kulan fantastic 3-geesood ah ku dhowaad dhammaan qaybaha ah in si fudud aad noqon kartaa addict ciyaaraha ah! Ha noqoto kulamada tartanka degdeg ah ama kulan taariikhi ah goob, ay kulan saddex geesood ah ay leeyihiin ay soo jiidashada gaar ah oo aad u soo jiidi doonaa dunida ah gebi ahaanba kala duwan. Halkan waxaa ku qoran liiska yar oo ka mid ah kuwa ugu fiican seddex kulan waji leh in ay ka qiimo isku dayaya:
Orbitarium waa kulan saddex geesood ah qotomiyey deegaanka dhuur ee meesha aad ee spaceship safri kartaa. Waxaad iska warwareegi karaa Galaxy, dagaalamo cadowga, iyo ururiyaan dhibcood. Iyadoo naqshadeynta fiican iyo qaababka ay gacanta wanaagsan, Orbitarium waa ciyaar ah oo ku kacaya ciyaaro!
Ma sida dagaal kulan aad? Haddii ay haa tahay, ka dibna Hero Craft Z waa ciyaarta ugu fiican saddex-geesood ah oo aad u! Ahaanshaha saddex geesood ah, ciyaarta ay hubisaa in waayo-aragnimo user fiican iyo waxay bixisaa dhowr ah oo dagaal hub in la siiyo dareenka oo ka fudud. Waxaad dooran kartaa in aad keligaa Dagaallamaan ama la dagaallamaan kooxaha. Waxaad heli kartaa ugu badan ee 50 Saaxiibadayda u dagaal ay cadaawayaashoodii.
3.Car Racing Qabille 2015
Haddii tartanka waa Misbaax, ka dibna aad si xaqiiqo ah u socdaan in ay tani xad-dhaaf ah tartanka ciyaarta saddex geesood ah ku jeclahay. Ujeedada kaliya ee ciyaarta waa in la siiyo ciyaaryahanka ugu waayo-aragnimo ah tartanka cajiib ah oo dhab ah. Waxa uu dareemi karaa walwalka, badhaadhaha iyo reyn ee kama dambaysta ah cayaaraha tartanka baabuurta iyada oo kulankaan.
Dhis aad qalcaddii gaar ah iyo wax kasta oo aad ka fekeri iyada oo kulankaan.
Ugaadhsiga 3D 5.Duck
Ugaadhsiga Gabbo 3D waa ciyaar fiican ee dadka rajeynaynaa in aan waqti ku dhinteen oo. Sida muuqata, waxaad u baahan doontaa in ay toogtaan shinbiraha badan intii suurto gal. Wixii toogashada, waxaa lagu siin doonaa tiro ka mid ah hubka. Naqshadeynta u fiican oo ay gacanta ku toogtay fudud, ka dhigaysa ciyaarta qiimihiisu ciyaaro.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaari ah kulanka kama dambaysta ah dagaal kula naqshadeynta fiican oo tiro ka mid ah qaababka kale, ka dibna Long Gunner Commando waa doorashada ugu fiican aad u! Waxaad heli doontaa si loola dagaalamo kooxaha argagaxisada ah iyo mas'uul ka ah hawlgallada muhiim ah oo kala duwan noqon. Haddii waxyaalahan oo kale aad xiiso, markaas Long Gunner Commando waa ciyaar aad had iyo jeer lagu raadinayso!
3D 7.Horse Racing Jilidda
Horse Racing Jilidda 3D waa ciyaar ah oo dhan waxaa ku caashaqi jiray isboortiga. Iyadoo naqshadeynta kaamil ah, iyo codad, waxaad la kulmi doonaan faras reyreyn kama dambaysta tartanka abid! Ciyaarta ayaa kuu ogolaanaya in aad ka qayb qaadato jinsiyadaha kala duwan iyo aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waa, kortaan aad faras si ka dhaqso badan dadka kaa soo horjeeda oo dhan.
8.Rage ee Todobo badood
Raage of Todobo badood waa ciyaar adventurous la naqshadeynta xal sare iyo goob kaamil ah. Waxaad tahay ninkii doonnida lahaa iyo aad leedahay doonaa oo u badbaadin ka hirarka badda iyo burcad badeeda. Waad beddeli kartaa markab model aad iyo aad u hesho qasnadihiisa qarsoon qoto dheer lagu aasay gudaha badda.
Google Play darajada: rating No weli.
Hyper Prism waa kulan saddex geesood ah halkaas oo aad leedahay si ay u caawiyaan qof ugu weyn in ay ka gudbaan heerarka kala duwan ee ay soo kabsaday ku caqabado iyo dabin.
10.Landlord 3D: Badbaadada Island
Milkiilaha 3D adag tahay in uu ka ciyaaro kulanka qaar ka mid ah caqabadaha. Ujeedada ujeedadu tahay si ay u noolaadaan jasiiradda taas oo guri in tiro ka mid ah caqabadaha ay ka mid yihiin xoolaha haadaamaha. In dhexeeya xoolaha, kuwaas oo dagaal off, aad leedahay si ay u ururiyaan ka bonus oo collectibles kale in la sii wado in heerka ku xiga.
Marka laga reebo kuwan, waxaa jira tiro ka mid ah kulan kale oo saddex geesood ah laga helo suuqa android. Kulamadan oo si fudud ku rakiban kartaa telefoonka smart android iyo ciyaaray mar kasta oo aad rabto inaad!
Emulator u Mac
> Resource > Emulator > Top 10 3D Android Games Worth cayaartoy ah